Adjective ဆိုတာ ဘာလဲ ? - Learn English Actively and Effectively in Yangon !!! 09 4311 5202 ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2
Home / Elementary to Pre-intermediate Level / Grammar - သဒ္ဒါ နှင့် ဆက်စပ်သော သင်ခန်းစာများ / Reading လေ့ကျင့်ရန် / Adjective ဆိုတာ ဘာလဲ ?
Adjective ဆိုတာ ဘာလဲ ?
Zin Zae 9:12 PM Elementary to Pre-intermediate Level , Grammar - သဒ္ဒါ နှင့် ဆက်စပ်သော သင်ခန်းစာများ , Reading လေ့ကျင့်ရန် Edit
Adjective ဆိုတာ " သော " နဲ့ ဆုံးတယ်လို့ ကလေးဆန်ဆန် မှတ်သားတာမျိုးတွေ
ရပ်တန်းက ရပ်ပါတော့ ။
English ဘာသာစကား စွမ်းရည် ရှေ့ဆက် တက်မရ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် ။
အခု ဒီ Adjective အကြောင်း ရှင်းပြထားတာလေးကို ဖတ်ရင်း
Reading အလေ့အကျင့်ရော Grammar Knowledge ရော ရအောင် လေ့ကျင့်သွားကြပါ ။
Wiki က ရှင်းပြထားတာလေးပါ ။ တိုတိုနဲ့ ထိထိမိမိ ရှိပါတယ် ။
English လို ရှင်းထားလို့ ဆိုပြီး ဘာမှ တွန့်မနေပါနဲ့ ။
အထက်တန်း ကျောင်းသား တစ်ယောက်တောင် ဖတ်လို့ ရပါတယ် ။
English လို ဖတ်ကျင့် ရစေချင်လို့ပါ ။
မဟုတ်ရင် ဆရာတွေ ဆီကနေ ခူးပြီးခတ်ပြီးသား မျှော်နေတဲ့ အကျင့်ကို ဖျောက်လို့ မရပဲ နေပါလိမ့်မယ် ။
ဒါဟာလည်း English ဘာသာစကား စွမ်းရည် မတိုးတက်ရခြင်း အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာ ပါပါတယ် ။
ကြိုးစားလေ့လာ လိုက်ပါဗျာ ။
( Founder & Trainer at Active English Class )
An adjective isakind of word that modifiesanoun. Nouns are words that nameaplace,aperson,athing, or an idea. An adjective isaword that gives more information about the noun that goes with it. It isapart of speech.
January/February တန်းခွဲသစ်များ အချိန်ဇယား>>>
<<< သင်တန်း Page & Websites မှာ သင်ခန်းစာ အချို့ ကြိုတင် လေ့လာလို့ ရပါတယ် ။
သင်တန်းလိပ်စာ : အမှတ် ၂၉ / A ၊ မြေညီထပ် ၊ ၁၆၇ လမ်း ၊ တာမွေကြီး (ခ) ရပ်ကွက် ၊
တာမွေမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
သင်တန်း မတက် ဖြစ်သေးရင်လည်း အဝေးကနေ လေ့လာလိုတယ်ဆိုရင်
အောက်မှာ လေ့လာစရာပေးထားတာတွေ ရှိပါတယ် ။
သေချာ စိတ်ရှည်လက်ရှည် လေ့လာသွားပါဗျာ ။
♦ English ဘာသာစကား ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများကို
အသစ်တင်တိုင်း Phone မှ တဆင့် ဖတ်လိုပါက
ဒီ Apk ( Android application ) လေးကို Download လုပ်ပြီး Install လုပ်ထားနိုင်ပါတယ် ။
♦ Active English ( ကိုဇင်ဇေ ) မှ အခမဲ့ ဖြန့်ချီပေးထားသော
English ဘာသာစကားနှင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ Ebooks များ
( 1 ) English ဘာသာစကားနှင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ( 1 )
(2) English ဘာသာစကားနှင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ (2)